June 23, 2011 na 1:06 obi
Ana m atụ anya na ndị na-esonụ-ufụn ke parser.php nhọrọ ga-configurable ke ngwa mgbakwunye ntọala otú ahụ ka anyị nwere ike redo ha mgbe upgrading. Ndị dị ukwuu nhọrọ!
June 23, 2011 na 10:53 obi
Ọ bụghị ihe niile ga-adị configurable, ka anyị na-adịghị na-achọ na-akụda onye ọrụ na ọtụtụ nhọrọ, nwekwara – a ihe a na-emekwa ka a mma ka elu ọrụ nke ịbụ ghọtakwuo ihe na-atụ anya na mgbe na-atụ anya, na adịchaghị m na ọ bụ ndị tozuru okè iji ghọọ akụkụ nke isi isi, dịkarịa ala abụghị n'ihi na oge na-aga ịbụ.
ekele maka ikwu doo
June 24, 2011 na 8:00 na
M nwere ike ịghọta na ihe nhọrọ nwere ike ọ gaghị tozuru okè iji gbakwunye na nhazi (ọ bụ ezie na ọtụtụ mgbe otu onye na-ahụ nhazi nhọrọ ngwanrọ ẹwụt nte “beta” ma ọ bụ “mere”, wdg. – ya mere e nweela – Ọbụna Transposh ugbua) Ka ghara ịchọ “akụda” onye ọrụ, niile ruru ùgwù, Anaghị m azụta na esemokwu na software nhazi. N'eziokwu, M ike na-ekwu na m hụrụ Transposh si nhọrọ dị ka ha bụ ndị 100% doro anya. Nke emekpala m. M nnọọ na-emefu oge 'A ga-agụ ruo mgbe m aghọta. Amaara m na e nwere ewu echiche ke ukwuu software na ị chọrọ “na-na ọ dị mfe”, ma ike mgbanwe nke ọrụ na-aga aka na-aka na complexity. Nke ahụ dị mfe ahia-apụ na nkà na ụzụ. Translation nhazi bụ inherently mgbagwoju. Mma na-agbalị iji ihe complexity na ndokwa / kọwaa nhọrọ dị ka mma na ị nwere ike, karịa “zoo” ha.
Hoo haa,, M obi ụtọ na ndị ahụ na nhọrọ ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na-ibuana ke translation on a mgbe niile site na iji Transposh otú anyị na-, M ga-achọta ha nweghi ihe yiri ya na ọrụ ma Transposh siri ike iji na-enweghị ka ha. Ntak-a na-emeghe ha ka ndị mmadụ?
Ọ bụghị na-agbalị na-ese okwu ebe a, ma “na-na ọ dị mfe” bụ otu nke m na-ekpo ọkụ buttons. Ndo ị kụrụ ya! 😉
dị ka na-ekwu,
June 24, 2011 na 5:59 obi
esi tinye Sitemap a mod?
June 24, 2011 na 7:55 obi
Biko gaa na:
June 25, 2011 na 12:01 obi
Nke a na kwachie adịghị arụ ọrụ nke m. Mgbe m bulite Sitemap-core.php wee pịa wughachi Sitemap “XML Sitemap Generator” na-ekwu,:
# Ikpeazụ ọsọ ke ndikụre! Ma eleghị anya, i nwere ike ịkpọlite ​​ndị na ebe nchekwa ma ọ bụ oge maka PHP scripts. Mụtakwuo
# Ikpeazụ amaara ebe nchekwa ojiji nke edemede bụ 36MB, na ịgba gị na ihe nkesa dị 256M.
# Ikpeazụ amaara-egbu oge nke edemede ama 133.07 Sekọnd, na ịgba gị na ihe nkesa dị 120 Sekọnd.
# Ndị edemede kwụsịrị na post nọmba 1716 (+/- 100)
June 25, 2011 na 12:09 obi
M nwere ike na-atụ aro iweli oge ịgba maka edemede ma ọ bụ na-akpụ akpụ na version 4 nke ngwa mgbakwunye
June 30, 2011 na 12:50 obi
June 30, 2011 na 11:57 obi
ekele nke na-ekere òkè nke a, e kwesịrị-eleghị anya a mma interface ka na-abịa na ụfọdụ ga-eme n'ọdịnihu version 🙂
Bharat Balegere na-ekwu,
July 4, 2011 na 4:07 na
Ọ transposh dakọtara na Hypercache?
Amasị m iji Hypercache karịrị ibu dị n'ime oghere.
Hypercache nwere otutu nhọrọ maka invalidating cache.But amaghị m otú e si jiri ya transposh.
July 4, 2011 na 1:12 obi
Ọ dịghị mgbe m na-anwale a, ma ekwere m nwere ike na-arụ ọrụ, enweghi nke invalidation nwere ike ime ka ụfọdụ ndị reposting okwu nke nsụgharị, ma na-agbalị ya, gị ihe agbara ịdị iche iche
Obere Red awo na-ekwu,
July 11, 2011 na 11:45 na
M nwere 2 ajụjụ…
1) Ga-amasị m mgbe ụfọdụ, dee m posts Bekee, mgbe ịsụgharị ha French, ma mgbe ụfọdụ, na French ma ịsụgharị ha English. Ọ ga-ekwe omume na otú?
2) Ga-amasị m na-ahụ naanị otu na-enwe ike ịsụgharị m posts na-amasị nhọrọ ghara iputa n'elu online ibe. Ebe ọzọ, ọ ga-ekwe omume, ndien didie ke?
July 12, 2011 na 11:46 obi
1. Dị gị mkpa iji tp_language meta gị posts
2. Dị enịm translation ikike ha, ọ ga-egosi na gị na online peeji nke, ma ọ bụghị n'ihi na ọrụ gị
July 14, 2011 na 10:15 na
M jụrụ gị ọtụtụ ugboro, ma ọ bụghị inwe ihe ọ bụla ọbọrọ. Ọbụna, ị wepụrụ m niile kwuru.
M emewo ihe ngwa mgbakwunye, config tinye wijetị nke ọma. Otú ọ dị, mgbe m pịa aka kpọmkwem asụsụ, o njehie:
“Ọdịnaya ngbanwe Error
Nke na ị na-agbalị iji lelee ikemeke gosiri n'ihi na ọ na-eji otu ihe ma ọ bụ ghara ịdị irè unsupported ụdị mkpakọ.”
Ị nwere ike ịlele m na saịtị, ma biko mee ka m mara gị ngwọta.
July 19, 2011 na 2:09 na
M gbalịrị zipuru gị ọtụtụ ugboro, biko nye a na-arụ ọrụ adreesị ozi-e na kwuru ma ọ bụrụ na ị chọrọ inwe azịza site n'oge ruo n'oge, M ga-akwado ịlele gị nazr nchekwa ọdịnaya site n'oge ruo n'oge ma ọ bụrụ na ị na-eche na ihe ọ bụla nke dị mkpa, otu obula – nnọọ na ị nwere azịza ebe a, gzip nke, Ma eleghị anya, na a mfịna ntọala gị na saịtị ma ọ bụ nsogbu ngwa mgbakwunye
July 18, 2011 na 5:06 obi
N'ihi na m na ọ bụ otu nsogbu ahụ ngwa mgbakwunye “gzip mkpakọ”. Gbalịa disabling ya iji hụ ma ọ solves nsogbu
July 23, 2011 na 7:19 obi
Daalụ maka Transposh na Ilyo ama ọbọrọ!
Amaghị m ihe m mgbe m nwee gzip mkpakọ, ma eleghị anya, na ọ bụ otu akụkụ nke WP ibu dị n'ime oghere ma ọ bụ w3 ngụkọta dị n'ime oghere ? Ma ugbu a,, otú m nwere ike iwepu ya? Biko nyere aka!
Ọzọ ajụjụ, M nakwa arụnyere a ngwa mgbakwunye ọzọ na saịtị, Ọ nọwo na-ezi ihe n'ihu. Otú ọ dị, site ụnyaahụ, ọ pụtara a oghere na peeji nke mgbe m pịa a kpọmkwem asụsụ. Ya mere, ihe bụ nsogbu?
Biko nyere m aka! Nile na-ekele ụmụ okorobịa ukwuu!
July 28, 2011 na 10:38 na
Ike n'ezie inyere gị aka nke ukwuu na ekele na gzip, a nwere ihe na-eme na a na-emegiderịta nhazi nke anyị na-amaghị nke.
The ide peeji nke ndị na-egbo site amụba PHP ebe nchekwa ịgba.
July 28, 2011 na 9:50 na
Mgbe anyị na-melite n'ihi na 3.2.1?
Na-amasị m gị Translation-Plugin na-amasị wụnye ya ka m Kacha ọhụrụ WP-Version
July 28, 2011 na 10:32 na
Ọfọn, ọ na-arụ ọrụ 3.2.1. Saịtị a na-agba ọsọ 3.2.1, maa m ga-agbanwe readme.txt anya ezuru.
July 29, 2011 na 1:47 obi
mma… Ụchụ.. na m isiokwu (Mondeo – si egbe-isiokwu) na-doesn't na-arụ ọrụ .Naanị na backend ga-adịgide adịgide sụgharịrị, ma na frontend ya doesn't arụ ọrụ 🙁
July 29, 2011 na 1:53 obi
mma, niile azụ… ugbu a, m nwere ya hinbekommen.
M gị n'anya plugin !!!
Ndo maka abụọ post…
July 29, 2011 na 3:50 obi
Obi ụtọ na-anụ na ihe niile bụ ezi ugbu a